International partners look forward to further political progress – Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Home » Latest news update » International partners look forward to further political progress
“Waxaan ugu hambalyaynaynaa Dowladda Federaalka Soomaaliyeed shirkaan guusha ku dhamaaday. Waxaan bogaadinaynaa ballan qaadyadii lagu sameeyay Madashii Wadatashiga ee Heerkeedu Sarreeyay, (ballanqaadyadaas oo ahaa) in la helo hanaan doorasho oo hufan loona wada dhanyahay sanadka 2016, (sidoo kalena) la xoojiyo arimaha amniga, lana dardar geliyo sidii natiijo waxtar leh oo la taaban karo lagu gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale, waxaan garwaaqsannahay muhiimadda ay leeyihiin qodabada ku jira Qaraarka Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2232 (2015) kana hadlaya muhimada ay leedahay inaan la kordhin waqtiga uu dastuurku siinaayo hay’adaha fulinta iyo sharci dajinta. Waxaan ogsoonnahay in sanadka 2016 aysan suurto galaynin qabsoomidda hab doorasho oo caalami ah kuna dhisan “qof iyo codkiisa”, laakiin arintaan (doorashada qof iyo codkiisa ah) waa in la gaaraa wareegga kale (xilliga doorasho ee kan xigta). Ballanqaadki la sameeyay ee ahaa in si dhakhso leh loo billaabo wadatashi qaran, laguna heshiiyo habka doorashada, sidoo kalena la billaabo wareejinta xafiiska dadweynaha waqtigi ku habboonaa ee 2016ka – ayaa ah ballanqaad soo dhoweyn mudan. Waxaa kale oo aan isku raacsannahay in habka doorashada dhacaysa 2016, kuna salaysan wadadatashi loo wada dhanyahay oo la yeelanaayo bilaha soo socda, uu ahaado mid ka horumarsan habkii doorasho ee dhacday sanadki 2012, doorashadaanina waa in ay ahaataa mid lagu gaaraayo hab doorasho oo caalami ah kuna qotama “qof iyo codkiisa”.
Saaxiibada Caalamka ee Soomaaliya ayaa ku codeynaayo sida ay uga go’antahay (inay arkaan) in si waqtiyaysan loo fuliyo ballanqaadyadi iyo heshiisyadi la galay, waxay sidoo kalena (ku celiyeen) inay sii wadi doonaan taageerada ay u hayaan (gaarista) hadafka ah in la helo Soomaaliya oo mid ah, federaal ah oo demoqoraadi ah, dhexdeedana ka heshiisay, heshiisna la ah dunida inteeda kale. Dhamaad
Previous: FCO Minister comments on Israeli announcement of new settlement units
Next: Soma Oil and Gas investigated by Serious Fraud Office
Rajadii Jaceylka Part 28
Warka 27 10 2016 Wasaarada maaliyada oo si casri loo dhisay & wadada wadnaha…
Giit wey ka dheeraatay Part 114
Adiga dartaa part 118